यसरी फलाउनुहोस् छतमा तरकारी – WASHKhabar
यसरी फलाउनुहोस् छतमा तरकारी
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार ११:०४ 644 पटक हेरिएको
काठमाडौ : अरुको घरको कौसीमा लटरम्म फलेको तरकारी र हरियाली देखेर कहिलेकाहीं तपाईलाई पनि लाग्दो हो, ‘आहा ! मेरो पनि यस्तै कौसी खेती भए ?’ तर सोचेर मात्र हुँदैन कौसीमा तरकारी। यसका लागि आफैले फलाउनु पर्छ । उसो भए कसरी फलाउने त कौसीमा तरकारी ?
कौसीमा तरकारी फलाउन गाह्रो केही पनि छैन । सबैभन्दा पहिले कौसीमा गमला वा चामल आदिको बोरा र माटोको व्यवस्था गरेपछि कुन जातको तरकारी फलाउन चाहनुहुन्छ सोही अनुसारको बेर्ना उमार्न सक्नुहुन्छ ।
प्रशिक्षक रेखा महर्जनका अनुसार प्रत्येक घरमा तरकारी तथा फलफूलका बोटहरु उमार्न सकिन्छ । यसका लागि थोरै समय भए पनि पुग्छ । मल बिना तरकार िनफल्ने भएकाले भान्छाबाटै निस्कने फोहोर वस्तुलाई कुहाएर मल बनाउन सकिन्छ ।
यसरी बनाउनुहोस्, कम्पोष्ट मल
यो पनि सजिलो तरिका छ । पहिले भान्छाबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी बर्गीकरण गर्ने । कुहिने फोहोरलाई कम्पोष्ट बिनमा हाल्ने । कम्पोष्ट बिन बजारमा किन्न पाइन्छ । कम्पोष्ट बिनमा हालेको फोहोरलाई चाँडो कुहाउनु छ भने ई.एम. झोलको मात्रा मिलाएर हाल्ने । जसले मललाई चाँडो गलाउन मात्र होइन, गन्ध आउन पनि दिदैन ।
ई.एम. का बिषयमा जानकार भवानी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘ई.एम.एक झोल पदार्थ हो जसमा लाभदायी शुक्ष्म जिवाणु पाइन्छ जसले मानिस र वातावरणका लागि हानिकारक शुक्ष्म जिवाणु नष्ट गर्छ ।’ उहाँका अनुसार ई.एम. घरमै अर्गानिक कम्पोष्ट मल बनाउन र बोट विरुवा उमार्न माटोमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै शौचालय सरसफाइको लागि हार्पिकको सट्टामा पनि ई.एम. झोललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
घरमै उत्पादित फोहोरबाट मल तयार भएपछि अब घरको छतमा कौसी खेती लगाउन सक्नुहुन्छ । माटो र मलको अनुपात मिलाएर मौसम अनुसारको तरकारी खेती लगाउन सक्नुहुन्छ ।
अब तपाईको कौसी खेती तयार भयो । तपाईको बचेको खाली समय अब कौसी खेतीमा लगाउनुहोस् । तपाई अब भान्छामा उत्पादित कुहिने फोहोरहरु क्रमशः कम्पोष्ट विनमा हाल्दै जानुहुन्छ । एवं रीतले ती फोहोरहरु मलमा परिणत हुँदै जान्छ । तपाईले त्यसलाई संकलन गरेर कौसीमा लगाएको तरकारी खेतीमा नियमित रुपमा हाल्ने गर्नुहोस् ।
जसले गर्दा फोहोर लिन नगरपालिकाको गाडी कहिले आउँछ भनेर पर्खेर बस्नुपनि परेन । फोहोरलाई मल बनाएर विभिन्न जातको तरकारी फलाएपछि तरकारी किन्दा लाग्ने रकम पनि जोगिने भयो ।